Home News Shabaab oo weerar culus ku Qaaday deegaanka Goof-Gaduud Buureey
Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta waxaa ay weerar ku qaadeen degaanka Goof-Gaduud Buureey, oo hoosyimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay fariisimo ciidamada Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen degaanka Goof-Guduud Buureey, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan.
Goobjoogayaal ayaa Warbaahina u sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaaro soo gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay inkastoo aan arintaasi la xaqiijin karin.
Dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay Al-shabaab, ayay ku sheegteen in ay qabsadeen degaanka Goof-Guduud, islamarkaana ay khasaare culus gaarsiiyeen ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Al-shabaab waxay qoraalkooda ku sheegteen, in ay dileen ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada Koonfur Galbeed.
Hayeeshee ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Koonfur Galbeed